Yakanakisa CBD Cream ye2021 | TryTranquil.net
CBD Cream Musoro Pearl w / Pearl Powder
musha / Mafuta / CBD Cream Musoro Pearl w / Pearl Upfu
zera Sarudzai nezvechisarudzo1 OZ / 700 MG
Mafuta Sarudzai nezvechisarudzoNaturalVanilla Clear
CBD Cream Musoro Pearl w / Pearl Powder huwandu
SKU yemusoro-pearl-cream chikamu Mafuta Tags CBD Kirimu, CBD Misoro
CBD Cream NaTryTranquil.Net
Kune nzira dzakawanda dzakasiyana dzekushandisa (CBD) cannabidiol, zvisinei, kana iwe uchitsvaga kuzorodzwa kwemajoini kana mhasuru kana rubatsiro nemamiriro eganda, CBD yemusoro kirimu inogona kunge iri sarudzo yakanakisa.
A CBD kirimu chero sarufu, mafuta ekuzora, kana misoro inomisikidzwa neCBD uye inogona kupihwa zvakananga kuganda.
Kunyangwe kutsvagisa nezveCBDD kuchiri muzvikamu zvevacheche, zvatinoziva nezveC CBD Cream iri kuvimbisa.
A 2016 kudzidza Yakavimbika Tsime yakapedzwa pamakonzo, yakawana kuti CBD Cream kunyorera kweCBD kunogona kubatsira mukugadzirisa kurwadziwa kwakanyanya uye kuzvimba kunogona kukonzerwa neArthritis.
Uyewo, the American Academy of Dermatology yakaratidza kuti kushandisa chinyorwa Chekutanga zvigadzirwa zveCBDD seyedjunct sampuli ye psoriasis, acne, uye eczema, pamusangano wavo wegore mu2018.
Kubudirira kweCDD kunogona zvakare kuvimba nezvinhu zvinotevera
Hunhu hweCBD Cream
Chipimo cheiyo CBD Cream
Zvinongedzo zveiyo CBD Cream
CBD Cream Yekurwadziwa Ruregerero
Vanhu vane system-yekusaina system iyo inonzi iyo Endocannabinoid system (ECS).
Mamwe masayendisiti akagumisa kuti CBD inopindirana nechakakosha chikamu cheECS - endocannabinoid receptor inogara mune yako immune system uye huropi.
Vanogamuchira mapuroteni madiki akasungirirwa kumaseru ako. Aya maseru anogamuchira zviratidzo, zvinonyanya kuve zvemakemikari, uye nekuzvigovera kuburikidza nemuviri wako wese.
Iyi mhinduro inogadzira marwadzo-kurerutsa uye kupesana nekuzvimba mhedzisiro iyo inobatsira nemuviri wako wekutambudzika marongero system. Izvi zvinoreva kuti misoro yeCDD nezvimwe zvigadzirwa zvinogona kubatsira vanhu vane kurwadziwa kwakanyanya kusingaperi, senge tora nguva refu kurwadziwa shure.
1 2018 kuongorora yakaratidza mashandiro anoita CBD zvakanaka pamwe nekurwadziwa kusingaperi mumuviri. Chidzidzo ichi chakatarisa kuyedza kwakaitwa pakati pa1975 naKurume 2018. Izvi zvidzidzo zvakaongorora mhando dzinoverengeka dzemarwadzo, kusanganisira:
CBD Cream YeArthritis Pain zororo
A 2016 kudzidza kuvimbwa mabviro yakatarisa CBD inoshandiswa mumakonzo ane arthritis.
Masayendisiti akaisa CBD kirimu kumakonzo kwemazuva mana akatwasuka. Iwo makonzo akagashira chero 4, 3.1, 0.6, kana 6.2 milligrams (mg) mazuva ese. Musayendisiti akarekodha yakaderedzwa kuzvimba uye kurwadziwa kwakazara mumakonzo akabatanidzwa majoini. Muedzo hauna kuratidza mhedzisiro yemhedzisiro
Iwo makonzo akagashira madosi ezasi e3.1 kana0.6 mg haina kuratidza kuvandudzika kwakawanda mumarwadzo avo. Zvisinei; musayendisiti akawana kuti 6.2 mg / pazuva raive dosi rakaringana kudzikisira kuzvimba kwemaronda nekurwadziwa.
Zvakare, makonzo akagashira 62.3 mg / pazuva aive nemhedzisiro yakafanana nemakonzo akagashira 6.2 mg / zuva. Nekugamuchira dosi yakakura kwazvo haina kuita kuti varatidze chikumbaridzo chekutambudzika.
Iyo inorwadza-kudzikamisa uye inopesana nekuzvimba mhedzisiro yeCDD kirimu inogona kubatsira vanhu vane arthritis. Zvisinei, kumwe kutsvagurudza kwevanhu kunodiwa.
(35) Zvaunofanira kuziva usati washandisa mishonga-isina maCDD zvigadzirwa zvekuzorodza l GMA - YouTube